ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: November 2009
ကျွန်မတို့တတွေ မကြာခဏဆိုသလို စားသုံးနေကျဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်မ တွေရဲ့ အဓိက အသုံးပြုတဲ့ အစားအစာဖြစ်တဲ့ အာလူးကို လူမျိူးမရွေးဘာသာမရွေး နှစ်သက်စွာ စားသုံးကြပါတယ်. . လူတိုင်း စားသုံးကြတဲ့ အာလူးကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီအောင် ဘယ်လိုစားသုံးသင့်တယ် ဆိုတာ ကို အာလူး ကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်း သိသင့်ပါတယ်. .
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, November 17, 2009 10 comments:
ကျွန်မသည် အာလူး၊ အာလူးကြော်များကို အရမ်းကြိုက်ပါသည်. . အာလူး ဆိုလျှင် မည်သည့် ပုံစံဖြင့် ချက်ထားပစေ ကျွန်မအကုန်စားပါသည်. . .
မနေ့ က ကျန်းမာရေး စာစောင်ထဲတွင် အာလူးကြော်၏ အကျိုးအပြစ်များကို ရေးထားတာကို တွေ့ပါသဖြင့် စာဖတ်ပရိသတ်များကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်. . . .
ဒါ့ကြောင့် အာလူးကြော်ကို အလွန်အကျွံ့စားသူများ သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်. . . . အာလူးကြော်အစား ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အခြား အစားအစာများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ သရေစာများကို အစားထိုး စားသုံးသင့်ပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြအပ်ပါသည်. . .
အာလူးစားသုံးခြင်း ၏ ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးများကို နောက်ပို့စ်တွင် ဆက်လက် ရေးသား ဖော်ပြပါမည်. .
ရေးသားသူ poemflower at Sunday, November 15, 2009 12 comments:
တစ်ခါ၍၌ လူတစ်ယောက်သည် ပင်လယ်ထဲ လှေနှင့် သွားရင်း အဖိုးတန်ပုလဲတစ်လုံး ရေထဲ မတော်တဆလွတ်ကျ သည်. . .
ကျသည်ဆိုလျှင်ပင် ကမ်းသို့ တရကြမ်း လှော်က ကမ်းစပ်ရောက်လျှင် ရောက်ခြင်း ပြေးဆင်းပြီး ရေပုံးတစ်လုံးယူ၍ ပင်လယ်ရေတွေ ခပ်ထုတ်သည်. . .
သုံးရက်လုံးလုံး ပင်လယ်ရေတွေ ခပ်လိုက် ကုန်းပေါ် ဝေးဝေးတစ်နေရာတွင် သွားသွန်လိုက် ဆက်တိုက်လုပ်ရာ လေးရက်မြောက်နေ့တွင် ပင်လယ်မှာနေသည့် ရေနတ်ဘီလူး ထွက်လာပြီး
"ဘာအတွက် ပင်လယ်ရေတွေ ခပ်ထုထ်နေရသနည်း . . . . "ဟု မေးလေသည်. .
"ကျွန်တော့ ပုလဲတစ်လုံး ရေထဲကျသွားလို့ပါ . . . "ဟု ပုဂ္ဂိုလ်က ဖြေသည်. . .
"ခင်ဗျားဘယ်တော့ရပ်မှာလဲ. . . "
"ရေခန်းလို့ ကျွန်တော့ပုလဲ ပြန်တွေ့မှပဲ ရပ်နိုင်မှာပေါ့ ဗျ. . . "
လို့ပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်ဖြေသည့်အခါ ရေနတ်ဘီလူး ချာခနဲက လှည့်ပြီး ပင်လယ်ထဲ ဆင်းသွားသည်. . . ရေထဲကျသွားသည့် ပုလဲလုံးကို တွေ့အောင်ရှာခဲ့ ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထဲ ထည့်သည်. .
"ကဲ . . . . ကျေနပ်ပြီလား တဲ့ . . ."
ရေနတ်ဘီလူး ကဆိုလေသည်. .
ရေးသားသူ may16 at Saturday, November 14, 20094comments:
23 Dec '09 –7Jan '10
Bowls of alms filled with crops are offered to monks who all wait inalong line.
Pilgrimage and holiday outings on country bullock carts can be seen.
Festival for all Kachin tribes. One of the biggest events in Northern Myanmar.
Leshi, Chin State
Animals are slaughtered in sacrifice followed by singing, dancing and drinking of home made alcohol beverages the whole night byahuge bonfire.
19 Jan – 17 Apr '10
Pilgrimage to this Pagoda is only possible in the dry season.2footprints of Lord Buddha are said to have been left at Shwe-set-taw when he visited there.
22 – 29 Jan '10
Like all Myanmar pagoda festivals, local products and snacks are sold, people visit by wearing colorful dresses and ornaments.
Traditional dances are performed at make shift theaters during the festival.
28 - 29 Jan '10
On the morning of 15th waxing day, incense is burnt in large flames inasymbolic gesture of offering sweet smell to the great image.
13 - 27 Feb '10
Ngapudaw, near Pathein
Long and secluded beach stretch between Pagoda Point and Cape Negrais is haven both for beach lovers and beach bums alike.
15 - 22 Feb '10
Pakhan Ko Gyi Kyaw Nat (spiritual being)
(Bet: Pakoku & Myingyan)
1st day - Ko Gyi Kyaw is coaxed and he ascends the throne
2nd day - Nat figures are cleansed with water and re-gilded
3rd day - drum-thumping for the nat and cock-fighting
4th to 7th day - designnated for pacifying Ko Gyi Kyaw
8th day - Re-enactment as told in legends
20 – 27 Feb '10
Hopin, Moe-Nyin, Kachin
Usually the pagoda is in the lake surrounded by water. In summer,afootpath leading to the pagoda surfaces enabling pilgrims to walk to the pagoda
21 – 27 Feb '10
Zalun, Ayeyarwady Division
First taken to Mumbai, India by colonialists but later regained. Famous as the "returnee image". Robe-weaving contest and bowl of alms offering are major highlights.
25 – 28 Feb '10
Traditional Pa-o theatrical performances and singing contests are included.
22 – 27 Feb '10
A large volume of Shan and Myanmar merchandise is traded.
Boat races on dote-hta-wa-di river.
25 – 27 Feb '10
24 – 28 Feb '10
Nan-Pan village, Inle lake
The sight of numerous monks who come in boats and receive food offerings is striking.
Shwedagon Tabaung Festival
Ceremonies at Shwedagon pagoda.
13 Feb – 27 Feb '10
Shwe Saryan Pagoda
Shwe Saryan village, Patheingyi, Mandalay
Merchandise from northern Shan State and other part of the country are exchanged at the pagoda bazaar. Toys made of palm leaf is specialty of the festival.
22 Mar –3Apr '10
13 – 16 Apr '10
Through-out the Country
The festival is held prior to Myanmar new year to cleanse away evil deeds of the past year with water. Youths go out for enjoyment while elders take retreat in monasteries and pagoda
premises to perform meritorious deeds.
Thanaka grinding Event
In the early part of the night, young women grind thanaka barks and roots toafine cream usually by using water on rounded stone slabs.
Young men play musical instruments and dance to support the event
People did meritorious deeds throughout the day by releasing life fishes in the ponds, wash hair and clean the old aged people.
Popa Nat Ceremony
Mt. Popa, near Bagan
During Thingyan water festival, pilgrims from the country pay respect to Popa Nat shrines.
26 – 27 Apr '10
Full-dress, large-scale procession followed by water-pouring on the sacred Bo-tree significantly, on the 14th waxing day of Kason,aday before normal watering day (i.e Full-moon day of Kason).
Pouring water onto the sacred Bo tree commemorates Buddha's birthday.
Dummy boat races on land, real boat races and water splashing in Mrauk-U canal on full-moon day.
Merry makers and pilgrims from Bago area visit this auspicious day.
2 –5May '10
Bazaar for Thanaka and lacquer ware from Kyauk-kar is the specialty of the event.
20 May –4Jun '10
Paying homage to the image presented by the King of Ceylon some 800 years ago.
28 May – 28 Jun '10
Wicker Ball Ceremony
Traditional wicker ball players from all over the country participate in the month-long contest that has been going on for over 70 years.
This is the best event to watch Myanmar chin-lone game.
22 – 23 Oct '10
The pagoda is noted for Buddhist paintings and carvings that are rested finest. Another ceremony is held on full-moon day of Thidingyut.
26 Jul – 23 Oct '10
Fish Feeding Ceremony
Held on the bank of Mone canal in Magwe. Groups of cat -fishes are fed throughout the Buddhist Lent, when many locals believe is the only time the fish appear.
Both pilgrims & merry makers from nearby villages spend their day at the Pagoda.
11 – 13 Aug '10
Shwe Kyun Pin Nat ceremony
Myanmar's last barter market where natives trade by exchange of commodities. Marine vessels, big and small, gather to pay respect whilst plying around on the Ayeyarwady.
Spirit dances included. 1st day - attendinganat audience, 2nd day - havingaroyal bath, 3rd day - cutting down htein tree.
20 - 25 Aug '10
Taung Byone Nat ceremony
Held for worshipping two Taungbyone spiritual figures. Major gathering spot for spiritual mediums. Spirit dances are rampant.
1st day - attendinganat audience, 2nd day - havingaroyal bath, 3rd day - ascending the throne, 4rd day - presenting roast rabbit, 6th day - cutting down htein tree
2 – 8 Sep '10
Yadanar Gu Nat ceremony
Held for Mother of two Taungbyone brothers. Most enjoyable because of the rowing boat trip to the site. Spirit dances are rampant. 1st day - attendinganat audience,
2nd day - havingaroyal bath, 3rd day - ascending the throne, 4rd day - daughter of Mahagiri reels on the ground in grief, 6th day - closing by cutting down htein tree.
15 – 16 Sep '10
Bupaya Pagoda Festival
Local boat racing ceremony in the Ayeyarwaddy River is held during the festival.
21 – 23 Sep '10
Tooth Relic Procession
The Tooth Relic mounted on an elephant, is taken the town on full-moon day in full-dress ceremony. During3days of festivities it is put on display for worshippers.
After the ceremony, the relic is kept insideaheavily locked chamber for the rest of the year.
Boe-min-gaung shrine, Popa
Boe-min-gaung is remembered for higher attainment in meditation practices. He was said to have found the way out of the worldly sufferings
Various kinds of ofterings are donated to monks.
Boats from villages around come and pay repeet to the pagoda.
9 – 26 Oct '10
Phaung Daw Oo Pagoda Fest & Leg rower Boat racing
Four Buddha images are ceremoniously tugged clockwise around the lake on the royal barge by leg-rowing boats. They return home on third wanining day. Leg-rowing boat races are held throughout the event.
18 Oct –6Nov '10
Buddhist chanting, early morning rice-offering to 1700 monks and the lighting of 9000 candles are major activities. The scenic beauty of the pagoda, situated on the river bank,
is dramatic. Famous utensils made of iron are sold atalarge scale.
22 – 25 Oct '10
22 – 24 Oct '10
Thidingyut Lighting Festival
To mark the day Lord Buddha came down from the Celestial. Abode after spending3months of the Buddhist Lent there. Buddha's return is remembered and commemorated throughout the country with colorful illuminations.
From 14th waxing day until the full-moon day numerous life-size dummy elephants sing and dance to the accompaniment of music.
23 Oct. '10 - Jul. '11
Approx9month long season. The boulder standing on the edge ofapeak in the higest mountain range, is said to be freely hanging over the cliff. Famous as pilgrimage and holiday outing spot. 9000 candles are lighted as to offer the Buddha.
Dances by day and, on the night of the 1st waning day of Thidingyut. Light floats dedicated to Shin Upagutta are put onto Shwekyin canal.
14 Nov –6Dec '10
16 – 21 Nov '10
Fire Balloons Festival
Special Tazaungdine festival takes place in Taunggyi, the capital of Shan State withahot-air balloon contest is held. Known locally as the Lu Ping Festival, it is thought to have been originated by the local Pa-O people. Competitors putalot of time, effort and money into preparing for the day time and night time contests. Day-time flying is meant for competition of animal figures and
Night-time is for beautiful fireworks. It isakind of both day and night procession.
Last day is the price giving day.
19 – 21 Nov '10
The pagoda is famous for its late Myanmar era sculpture.
20 – 22 Nov '10
The one and only market where leaves, roots, fruits, barks, thorns, tubers, stems of any herbal value from the western wilderness of the Chindwin River are sold onalarge scale.
Shwedagon, Botataing Pagoda, Yangon
On the 14th waxing day of Tazaunmon, groups of young women take part in competitions held on the platforms of the pagodas. The robe is to be finished flawlessly overnight
and offered at dawn to the images around the pagodas.
Shweponepwint Pagoda, Yangon
Society of astrologers pay homage to elders. Free astrological predication for the night.
Tazaung-daing lighting festival
Having fine weather and clear sky, and having the first crop harvested. Myanmar celebrate the night with various kinds of illuminations.
On full-moon day. 9999 candles are ceremoniously lit. At midnight, visitors are served with mixed salad of maezali buds, believed to possess powerful, magical and
medicinal properties if eaten at this time.
21 – 26 Nov '10
21 Nov. '10
Maha An Htoo Kanthar Pagoda
18:00pm (9000 Candle Lighting Ceremony at Pagoda)
22 Nov. '10
21:30pm (Night Hot Air Balloons Competition and Award-giving Ceremony)
Intresting procession includes denonstrations of the miraculous powers of Lord Buddha, robbing ofaShan merchant caravan etc.
14 – 21 Dec '10
This is the only image that puts on glasses offered byacertain donor in colonial time.
http://www.myanmartraveler.com/festivals.asp မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်. . .
ရေးသားသူ poemflower at Thursday, November 12, 20093comments:
ကျွန်မနှင့် အိမ်ထောင်ရေး.... Zox ရဲ့(တက်ဂ်ပိုစ့်) ရေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာပြန်တယ်။ခင်မင်မှု အရင်းတည် ဖြစ်ညှစ်ကာ ထုတ်ရပါတော့တယ်။ အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ မေ၁၆ ရော... မပန်းကဗျာ ရော... အပ်စပ်မှုမရှိပါဘူး။ ဘာလို့လည်းလို့မေးရင်.. အတွေ့အကြုံမရှိလို့ပါ။ အခုရေးရမယ် ဆိုတော့လည်း ရန်းဆော် မှန်းဆော်လုပ် ရပေဦးမှာပေါ့။ စာတွေ့ဖြစ်သည့်အတွက် ငါတွေ့မဟုတ်သောကြောင့် စာထဲက အချက်အလက် အချို့ကို သေချာ သဘောမပေါက်ပါ....
ခေါင်းစဉ်အရ အိမ်ထောင်ရေးအကြောင်း ပြောရမှာ ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ စဉ်းစားတဲ့ မိန်းကလေး လိုက်နာရမဲ့အချက်တွေ အရင်ပြောရအောင်နော်....မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖို့ အိမ်ထောင်ပြုမှားလျှင် ပြန်ပြင်မရနိုင်သော ကိစ္စဖြစ်သည်။ "အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး " ဟုဆိုသည်မဟုတ်ပါလား။ ဒီတက်ဂ်ပိုစ့်လေး အတွက် ရေးဖို့စာကိုစဉ်းစားရင်း ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့စာ လေးတစ်ပုဒ်ကိုသွားသတိရပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ပြန်ပြောပြရရင်။ အိမ်ထောင်ပြုမယ် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် မလွဲမသွေ ရှောင်ရမယ့်အချက်က ကွာသုံးကွာ၊ ပါသုံးပါ နှင့် ချာသုံးချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးပါးကို မိန်းကလေးက ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ယောက်ျားလေးကပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိနှင့်လက်တွဲမယ့်သူမှာ ပါလာရင်တော့ ဝေးဝေးမှရှောင်ကြဉ်ရန် ပြဆိုထားပါတယ်။
(၁) တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးကွာလျှင် (၂) အယူဘာသာကွာလျှင် (၃) စိတ်ဓာတ်ချင်း ကွာလျှင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းခြားပြည်ခြား လူမျိုးခြားနှင့် ဘာသာမတူသူ ဘာသာခြားကိုယူမိရင်တော့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို စွန့်ရပါလိမ့်မယ်။ ထို့အတူ ဘာသာတူ လူမျိုးတူ ဖြစ်လင့်ကစား စိတ်ဓာတ်မတူ ကွာခြားလျှင်လည်း တစ်မိုးအောက်မှာ ၂ယောက်အတူနေဖို့ မစဉ်းစားသင့်ပါ။
အနာရောဂါဆိုသည်မှာ ခေတ္တနာဖျားတာမျိုး မဟုတ်ပဲနာတာရှည်မျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ အကြွေးပါလာလျှင် ဆိုတာကတော့ လက်မထပ်ခင်ကတည်းက အကြွေးတင်နေရင်ဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ အညွှန့်လူဖို့ အတော်ခဲယဉ်းသွားပါပြီ။အပိုစားမည့်သူပါလာလျှင် ကျွေးနိုင်သည်ပဲထားဦး စကားပိုလာသည့်အတွက် ရှင်းရတဲ့ပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ နိုင် ပါတယ်။
(၁)ပညာရေးချာလျှင် (၂)စီးပွားရေးချာလျှင် (၃)လူမှုရေးချာလျှင် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပညာဆိုရာမှာ..အတန်းပညာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုမြင့်မားစေတာမို့ ပညာတတ် တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ပညာဆိုရာတွင် အဆင့်ဆင့်မခွဲပဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာသည်လည်း အကျုံးဝင်ပါတယ်။ အဓိကမှာ အသိဥာဏ် ဆင်ခြင်တုံတရား မြင့်မားမှုမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ စီးပွားရေးဟာလည်းပညာရေးနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တစ်ခုမြင့်မားလာလျှင် ကျန်တစ်ခုက အချိုးတူ မြင့်လာပါတယ်။ ပညာမတတ်ပဲချမ်းသာနေသူတွေကိုတွေ့ရပေမဲ့ ပညာမတတ်ခဲ့လျှင် ငွေပင်ရှိစေဦးတော့ ပွဲလယ်မတင့်ပါဘူး။ လူမှုရေးချာလျှင်.....ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမပြုပဲ ချမ်းသာလာတဲ့သူ အများစုဟာ အနေအထိုင် စရိုက် ဟန်ပန်တွေမှာ ပညာတတ်သူကို မမှီနိုင်ဘဲ ငွေပါတာက လွဲပြီး အသိဥာဏ် နည်းတတ်ပါတယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရား ခေါင်းပါးတတ်ပါတယ်။
အဲဒီ သုံးမျိုး သုံးပါး ပါနေတာကို သိပါလျှက်နှင့် မိမိစိတ်အလိုလိုက်လို့ဖြစ်စေ၊ မလွဲမရှောင်သာလို့ဖြစ်စေ၊ တဇွတ်ထိုးလုပ်လိုစိတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘေးဖယ်ပြီး စဉ်းစားလို့လက်တွဲလိုက်ပြီးရင်တော့ ဘ၀မှာ အမှားနှင့်တစ်သက်လုံးရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ရောက်ပြီးမှ အမှားကို ပြန်ပြင်ချင်ပါရစေလို့ ဆိုရင် နောက်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဟာ တစ်ခါရေးပြီးတိုင်း တစ်ခါ ပြန်ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ရေးနိုင်တဲ့ ကျောက်သင်ပုန်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရေးသားထားတာကိုပြန် အမှတ်ရရင်း မှတ်မိသလောက်ပြောပြခြင်းပါ။
ငယ်စဉ်က အသိလေးကတော့ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ချစ်တာတွေ၊ မေတ္တာတွေ၊ ခံစားတာတွေလို့ အဓိကထင်တာပါ၊ အခု အသက်လေးရလာတော့ လူမှုဘ၀ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ဘ၀ တက္ကသိုလ်ကြီးက ပညာတွေ ပို့ချလာတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ မပူချင်လို့ ယောက်မရှာတာမျိုးပါ၊ ဒီအပြင် မိန်းကလေးတွေ လက်ထပ်ခြင်းကို စဉ်းစားရာမှာ အောင်ဘာလေထီထိုးတဲ့ သူတွေလိုပါပဲ။
ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ဆုကြီးကို မျှော်ပြီး၊ စိတ်ကူးပြီး ဂဏာန်းတွေရွေးတာပဲ၊ ပေါက်မယ်ထင်ရတဲ့ ဂဏန်းတွေပေါ့နော်။ အဲ...ထိုးပြီးရင်လည်း စိတ်ကူးယဉ်ရတာပဲ။ ဘယ်လိုသုံးစွဲမယ်၊ လှူမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ထီဖွင့်တဲ့အခါ မှာလည်း သိန်း ၁၀၀၀ ဆုမှန်းပြီး ပထမကြည့်တယ်။ နောက်သိန်း ၁၀၀ နောက် ၅၀ စသည်ဖြင့် အစဉ်လိုက် တိုက်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံး တွတ်ရရင် တောင်မဆိုးပါ ဘူးပေါ့။ တွက်ကိန်းတွေနဲ့ ... တိုက်လာလိုက်တာ...ထီစာရင်း လည်းကုန်သွားရော...ဘာမှ မပါတော့ သွားပြန်တော့ ဒီတစ်ခါဆိုသလို...ဘယ်ဆုနဲ့တွေ့မယ် ဗလာမဲ နဲ့တိုးမယ်...မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့အခါလည်း ထီဆုကြီးမှန်းသလို အားလုံးတော့ အကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့ ဒါလေးကတော့ ဒီလိုဆို အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ စိတ်ကူးကြီင်္းတွေ နဲ့ပေါ့။ ဗလာမဲနဲ့ လည်းတိုးနိုင်ပါတယ်။
ဒါအပြင် အိမ်ထောင်ရေးကံ ကောင်းမကောင်းဆိုတာကလည်း ကုသိုလ် နှင့်လည်း ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေးရှေးက ပြုခဲ့တဲ့ကံ ကံ၏အကျိုးတွေပါ။ မိမိတို့ အတိတ်ဘ၀များက ပြုခဲ့သည်ကံများလည်းရှိရာ ထိုကံများသည် မိမိပြုခဲ့သော အမှုအတိုင်း အကျိုးပေးတတ်သည်။ အတိတ်ဘ၀ကံ မမြင်ရ၍ မသိစေဦးတော့ ယခု မျက်မှောက်ဘ၀၌ ကံကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ကာ လက်ငင်းကောင်းအောင်လုပ်ပါက ကောင်းကျိုး ပြန်ရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သည် ထီထိုးခြင်းလို့ယူဆပါက...အိမ်ထောင်ရေးထီတွင် သည်းခံခြင်း၊ ခွင့်လွတ်ခြင်း၊ နားလည်ပေးခြင်းစသော အမှုတို့ဖြင့် ပြုကျင့်ကြလျှင် သိန်း ၁၀၀၀ ဆုကြီးမပေါက်စေဦးတော့ ထီပေါက်စဉ်ဖိုး ဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။
ကဲ...သိသလောက်လေးတော့ ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ... တူနှစ်ကိုယ်တဲ့အိုပျက်မှာ နေရ..နေရ...ဟူသောအတွေး၊ ရေရှားတဲ့ သဲကန္တာရ မရှောင်တယ် ဟူသော စိန်ခေါ်မှု၊ တုံးခုလို့ မှ လှမ်းမရ ရင် တံချုနှင့် ခူးပစ်မယ် ဆိုတဲ့ ရဲရဲတောက် အချစ်မျိုး ငယ်စဉ်က မတွေ့ခဲ့၍.......... ဒီခေါင်းစဉ်လေးနှင့်တော့ မေ၁၆ ဦးနှောက်ခြောက် ရပါတော့တယ်။
အားလုံး မေတ္တာချစ်ခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ရေးသားသူ may16 at Sunday, November 08, 2009 10 comments:
ထိုထက် ဆွေမျိုးမိဘအရိပ်က ပို၍ အေးချမ်း၏
ထိုထက် ဆရာသမားအရိပ်က ပို၍ အေးချမ်း၏
ထိုထက် မြတ်စွာဘုရား အရိပ်က အဆများစွာသာလွန် အေးချမ်း၏
The refuge of the tree is cool.
Even more is the refuge of parents and relatives.
Even more is the refuge of the teacher.
Far more is the refuge of Buddha.
ပျားပိတုန်းတို့သည် ပန်းကို အလိုရှိကုန်၏
သူတော်ကောင်းတို့သည် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အလိုရှိကုန်၏
ယင်ကောင်တို့သည် အပုပ်ကို အလိုရှိကုန်၏
သူယုတ်တို့သည် အမျက်ဒေါသကို အလိုရှိကုန်၏
Bees want flowers.
The virtuous want virtue.
Flies want the putrid.
The wicked want anger.
အမိအဘတို့၏ အဆုံးအမကို မရမူ ကိုနှုတ်အမူအရာ ကြမ်းတမ်း၏
အမိအဘတို့၏ အဆုံးအမကို ကောင်းစွာရမူ ကိုယ်နှုတ် အမူအရာ လိမ္မာယဉ်ကျေး၏
Deprives of parental teachings, one tends to be harsh in words and deeds.
Benefited by parental teachings one is gentle in words and deeds.
အမျက်ဒေါသကို ဖြေဖျောက်နိုင်လျှင် စိုးရိမ်ခြင်း ကင်းရ၏
သူ့ကျေးဇူးကို ဆိုတတ်လျှင် သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းကုန်၏
ကြမ်းကြုတ်သော စကားကို သည်းခံခြင်းသည် မြတ်၏
Dissolving anger frees one from worry.
Expressing one's gratitude is praised by the virtuous.
Tolerating rude words is virtuous.
ရေးသားသူ poemflower at Saturday, November 07, 20096comments:
စိတ်နှင့်ရုပ် နှစ်မျိုးစလုံးလှသူဟူ၍ (၃) မျိုးရှိ၏
"လောကီပုဂ္ဂိုလ်၊ လူဟုဆိုက၊ ရုပ်ကိုမကြည့်၊ စိတ်ကိုကြည့်လော့ "
ဟူသော လင်္ကာ ပိုဒ်ကလေးကို မှတ်သား သတိထားသင့်ပါသည်.
လူရည်ချောသည် မချောသည်ထက် တကယ်တမ်း မျက်နှာကိုကြည့်လျှင် သိသာပါသည်. .
လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပေါင်းသင်းမည်ဟုဆိုလျှင် ရုပ်လှပမှုနှင့် အဆောင်အယောင်ကို မကြည့်နှင့်. . . ထိုအချက်ကို အဓိက ဂရုမစိုက်ထားဘဲ ထိုသူ၏ အဇ္ဈတ္တအတွင်းသဘောကို စောကြောစစ်ဆေးရန်လိုသည်.
စိတ်သဘော ဖြောင့်စင်းသူသည် ဒုက္ခမပေးတတ်. . . အသက်ထက်ဆုံး ခင်မင်စွာ ပေါင်းသင်း၍ ကောင်း၏. . . အပြင်ရူပကာယနှင့် အတွင်းနမကာယ နှစ်ခုစလုံးကောင်းသူနှင့် ပေါင်းရခြင်းကား အတိုင်းထက်အလွန်ပင် ကောင်းလှသည်. . .
သကြားရေ ဖုံးထားသော ဆေးပြားများပမာ အပြင်ချိုဟန်ရှိပြီး အတွင်းခါးလျှင် စိတ်ထား စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ ကောင်းလှသည်. .
တိုင်ပင်ဖော်၊ တိုင်ပင်ဖက်ဟူသည်. လူ့ဘ၀၌ ရှိသင့်သည်ဖြစ်ရာ စိတ်နှလုံးလှပသူနှင့် တွေ့ဖို့ အရေးကြီးလှပါ၏. . . ပေါင်းသင့်ပေါင်းထိုက်သည်ဟု ယူဆသော မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများနှင့်လည်း ပေါင်းရပါမည်. . .
ဘယ်ကိစ္စကို ဘယ်သူနှင့် ပူးတွဲဆောင်ရွက်ရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပေါင်းသင်းသောအခါ. . စိတ်နှလုံးလှသူနှင့် တွေ့က အောင်မြင်ဖို့ တစ်ဝက်သေချာနေပြီဖြစ်၏. . .
ထို့ကြောင့် လည်း စိတ်နှလုံးလှပသူကို ရှာဖွေပြီး ပေါင်းသင်းကြရမည်ဖြစ်သည်. . . စ်ိတ်နှလုံး လှ မလှ မှာ မိတ်ဆွေ၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်၏. . .
စိတ်နှလုံးလှပသူနှင့်တွေ့၍ တိုးတက်သွားရသူများရှိသလို၊ စိတ်ယုတ်၊ နှလုံးယုတ်နှင့်တွေ့၍ စည်းစိမ်ပျက်၊ ဘ၀ပျက်သူများကိုလည်း တွေ့ဖူးကြမည်ဖြစ်သည်. . .
မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ရုပ်အလှထက် စိတ်အလှကို ဖော်ကြူးနိုင်ပါစေလို့ . . .
ရေးသားသူ may16 at Thursday, November 05, 20093comments:
လားနှစ်ကောင်ဟာ လေးလံတဲ့ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ ခရီးထွက်လာကြတယ်. . . တစ်ကောင်က ပိုက်ဆံတွေ အပြည့်ပါရှိတဲ့ အိတ်တွေ သယ်ခဲ့ရသတဲ့. . . ကျန်တစ်ကောင်က စပါးတွေပါတဲ့ အိတ်တွေကို သယ်ခဲ့ရတယ်. .
ပိုက်ဆံတွေသယ်လာတဲ့ လားက မော်လို့ကြွားလို့ ခေါင်းတထောင်ထောင်နဲ့ သွားနေတာပေါ့. . . သူ့လည်ပင်းပတ်က ခေါင်းလောင်းကို အသံကျယ်ကျယ်မြည်အောင် လှုပ်ခါနေပေမယ့်. . . သူ့အဖော်ကတော့ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်စွာပဲ ခရီးဆက်လာတယ်. .
တစ်နေရာရောက်တော့ ဓားပြတွေဟာ ချုံထဲက ရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးနောက် တိုက်ခိုက်ကြလို့ ပထမလားဟာ ဓားထိုးခံလိုက်ရတယ်. . . .ငွေတွေလည်း အလုခံလိုက်ရတယ်. . ဒါပေမယ့် ဓားပြတွေဟာ စပါးတွေကို အပင်ပန်းခံပြီး သယ်ယူသွားဖို့ကိုတော့ မစဉ်းစားကြဘူး. . . .
ပိုက်ဆံတွေသယ်လာတဲ့ လားဟာ သူ့ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့် ဟစ်အော်ငိုကြွေးနေတာပေါ့. . . ကျန်တဲ့လားက ငါ့အဖို့ ဓားပြတွေ ဂရုစိုက်မခံရတာ ၀မ်းသာစရာပဲ. . . ငါ့မှာ ဘာတစ်ခုမှ အဆုံးအရှုံးမခံလိုက်ရဘူး . . . ကိုယ်မှာလည်း ဒဏ်ရာမရခဲ့ဘူး လို့ဆိုတယ်. .
(ရိုးသားနိမ့်ကျတဲ့ဘ၀ က လုံခြုံမှုရှိတယ်. . ချမ်းသာသူတွေအဖို့ အန္တရယ် အမြဲရှိနေတာပဲ)
ရေးသားသူ poemflower at Tuesday, November 03, 20094comments: